Maxaa ku dhacay jirka Muuse? | Apg29
Laakiin waxa ku dhacay jirka Muuse ka hor waxaa lagu aasay? Qorniinku wuxuu leeyahay wax ku saabsan?
Muuse aaska jirin aaska caadiga ah. Waxa ay ahayd Ilaah qudhiisu kuwaas oo waxaa isagii lagu aasay oo ninna waxba kama oga, halkaas oo waxaa lagu aasay uu.
Muuse ahaa nin nebi ah, sida marna jiray isaga, waayo. Waxa uu soo maray wax ka mid ah ma ka hor ama ka dib isaga ayaa soo maray Rabbiga la hadlay isagii fool ka fool ka "(5 Mos. 34:10).
Muuse, oo ahaa addoonkii Rabbiga "ku dhinteen dalkii reer Moo'aab sidii Rabbigu ka hadlay oo yidhi, oo wuxuu isagii ku aasay dooxada ku dhow Beth Pegor reer Moo'aab, laakiin ninna waxba kama oga meesha saxda ah aaska (5 Tirintii 34:. 5-6).
oo markuu dhintay wuxuu jiray boqol iyo labaatan sannadood, laakiin inkastoo uu da ', waxa uu ahaa si fiican oo caafimaad leh oo xoog badan. Kitaabku waxa uu yidhi:
"Isaga oo hortooda ayaa lagu maqnayn oo ma uu badiyay xooggiisa" (5 Mos 34:. 7).
At aaska si joogto ah aad u saaray qof dhintay xabaal. Laakiinse Muuse oo ahaa Rabbiga qaaday daryeelka in, ninnana waxba ma uu ogol yahay in la ogaado meesha ama sida ay u dhacday.
Laakiin waxa ku dhacay jirka Muuse ka hor waxaa lagu aasay? Qorniinku wuxuu leeyahay wax ku saabsan? In Yuudas aayadda 9, waxaan ka akhrisan:
"... xitaa ma Michael dhicin inay Ibliiska ashtakeeyaan ama ku qoslaan markii uu la dirireen ku saabsan meydkii Muuse aawadiis. kaliya wuxuu ku yidhi, Rabbigu wuxuu Sayidkayga ku aawadood idiin edbin doonaa. ' "
Dagaalka u dhexeeya Michael iyo Ibliisku ku saabsan oo ahaa milkiilaha Ehelka jirka Muuse. Devil sheegay in, maxaa yeelay, wuxuu doonayay inuu jidhka ku rid qabriga. Laakiin Michael loo baray. jirka Muuse ayaa cirka u tegi lahaa.
In Cibraaniyada. 2:14 waa eray in xiiseynayaan in macnaha guud:
"Tan iyo markii Carruurtu waxay qayb ka heleen jidh iyo dhiig, waxa uu sidoo kale uu (Ciise) ayaa sidoo kale qayb ka mid ah taas oo ah, waayo, by uu dhintay ka dhigi lahaa isaga yaraa dhimashada lahaa xooggiisa, in uu yahay, Ibliisku".
In turjumaad kale waxaa sidaas leeyahay,
"... dhimasho gees u amiir dhimasho."
Dhimashada gaar ahaan waa garaaca kan Ibliiska, iyo goobta. Waxa uu ahaa sababta dhimashada in dunida u yimid oo uu doonayo in uu qaado daryeelka jidhkooda oo waxay iyaga keeni qabriga. Sidaas ahaa jirka Muuse.
In 1 Korintos. 5 Paul ku hadla ee foomka halis ah oo sinada. Waxaa jiray qof wada noolaa naagtii aabbihiis la. Rasuulka ayaa si adag u cambaareyneysaa sharkan oo ku qoray Aayado 3-5:
"Aniga ahaan, in uu yahay dhab ahaan jidhkaygu idinka maqan yahay, ruuxaygu waa idinla joogaa, hore u leeyihiin sidii aniga oo jooga, lagu cambaareeyay kuwa sidaas u dhaqmeen.
In Rabbigeenna Ciise Masiix nahay, aad iyo ruuxayga, inay u yimaadaan si wadajir ah ula Rabbigeenna Ciise Masiix ee awoodda inay la xiriiraan shuruudaha Shayddaan ku for burburinta jidhka, in ruuxa ku badbaadi laga yaabaa in Rabbi Ciise. "
Halkan waxaan ku aragnaa in Paul la Corinthians ahaa Baxaan qofkani Shayddaan ku yidhi "in jidhku baabba'o ah."
Paul ahaa aragti si nebiyada, in kastoo uu uu ka maqnaa arki karin waxa meesha ka socda ee kaniisadda iyo dabin xukunka kuwii ka go'an caro iyo xumaadeen iyada aayo in habka ugu cabsi badan.